Manàna finoana an’Andriamanitra – FJKM Ambavahadimitafo Manàna finoana an’Andriamanitra |
Manàna finoana an’Andriamanitra
Publié le 06 juin 2021 à 07:06
Alahady 06 jona 2021, andinihina ny lohahevitra vaovao eo amin’ny sahan’ny FJKM : « Anorenana ny maha-kristiana ny finoana ». Ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Marka 11 : 20-24
« Ary nony maraina, raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin’ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiahy ka nanao taminy hoe: Raby ô, indro fa efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Manàna finoana an’Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no hilaza amin’ity tendrombohitra ity hoe: Mifindrà, ka mianjerà any an-dranomasina, ka tsy hiahanahana ao am-pony, fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo: Na inona na inona tononinareo amin’ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. »
Manasa anao hiombona amin’ny fanompoam-pivavahana taorian’ny fikatonan’ny trano fiangonana noho ny amehana ara-pahasalamana Covid-19 nandritra ny 2 volana sy tapany.